Umkhiqizi weSihlalo ohamba phambili neFektri | AmaMede
IMEDO idala izihlalo eziguquguqukayo nezikhululekile. Sihlala sibuyekeza amaqoqo ethu ukuze alingane emakethe yakho. Ngobuciko obuyinkimbinkimbi nenqubo yokulawula ikhwalithi, sikunikeza ngemikhiqizo esezingeni elizokusiza wakhe umkhiqizo wakho.
Nazi izihlalo ezinokwethenjelwa ezikunikeza ukwakheka kwemfashini ezintweni ezahlukahlukene kubandakanya ukhuni nesikhumba, insimbi nesikhumba.
Izihlalo zokudlela zanamuhla nezesimanje ezikhiqizwe yi-MEDO zingahlanganiswa nemiklamo yetafula lokudlela ehlukile. Kulula kuwe ukunikela ngamasethi okuphelele okudlela kumakhasimende wakho.
Ukwakha Izihlalo Zokunethezeka Zokunethezeka
Isihlalo sesikhumba esinesihlalo sokungcebeleka semilenze yensimbi yekhabhoni kumiklamo yezinto ezinephiko elamukela isihlalo sobukhosi esibonakala ngaphakathi ngobumnene besihlalo nesihlalo sangemuva.
Izihlalo Zokungcebeleka Zensimbi Yensimbi
Isisekelo senziwa ngensimbi kanye nesigqiki sesihlalo esinamapulangwe ahanjisiwe afakwe phansi okufakiwe okuyisisekelo kugwebu lememori.
Ngaphansi kwe-foam ephezulu kakhulu kukhona insimbi ephelele.
I-armrest enesikhumba isilethela umuzwa omuhle.
Izihlalo Ezincane Zokuzilibazisa Zasegumbini Lokulala
Isikhumba nezihlalo zezihlalo kungumklamo obushelelezi. Isondele ngemvelo ngombala. Isihlalo nangemuva kudonswa ngomcamelo othambile esikhunjeni se-microfiber. Isikhumba se-microfiber siyashelela futhi siqinile. Ngokombono oseduze, ukuthungwa esihlalweni kujule kakhulu futhi kungokwemvelo.
Isihlalo Sokuzijabulisa Esikhululekile Esikahle
Izihlalo ezinombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ifanele igumbi lokufundela nendawo yokuzilibazisa. Lesi sihlalo sisebenzisa isikhumba esigcwele. I-backrest ne-armrests isonga umzimba wonke ngaphakathi. Kunomcamelo omncane omelene ne-headrest, owenza ukuthi isihlalo sobukhosi singabe sisaba yisidina. Uma ukhathele, ungathatha ikhefu esihlalweni sokungcebeleka.
Usihlalo weSmart Leather Dining
I-backrest ku-polyurethane yesakhiwo eboshwe ngokuguquguqukayo okumelana nomlilo. I-backrest nesihlalo semali kufayibha emelana nokushisa ephefumula umlilo.
Izinto: isikhumba se-microfiber.
Umlenze wokudla wenziwe nge-carbon steel.
Isitulo Sokudlela Sesitayela Sesimanje
Isakhiwo sesitayela se-minimalism sesakhiwo se-backrest nemilenze. Isikhumba esingeziwe sesakhiwo se-backrest nemilenze nezinto ezibonakalayo: izinkuni + isikhumba se-premium sehhashi ngomlenze wokudlela: izinkuni eziqinile.
Ifakwe ngokuphelele endwangwini noma esikhunjeni futhi isihlalo sigqokiswe ngesikhumba, ingubo yokwakhiwa kwendwangu yonke yokwakhiwa kwesakhiwo nemilenze.
Isikhumba esingeziwe, isihlalo sendwangu; Upholstery wesakhiwo se-backrest nemilenze.
Izinto: microfiber lesikhumba + indwangu.
Sihlalo Sokufunda Esinethezekile
Isihlalo ku-plywood enezinto eziphezulu zenjoloba yemvelo, enamekwe ngogwebu lwe-polyurethane engacimi umlilo. Isihlalo nebhande langemuva bese kumbozwa ngentambo yokuphefumula eboshwe ngokushisa eboshiwe.
Imilenze yokudlela yenziwe nge-carbon steel.
IMEDO Minimalism Luxury Leisure Armchair Manufacturer
Ukwakha izihlalo zokuzilibazisa zikanokusho kungcweti yokwenza lezo amakhasimende akho azothanda zona. Kungakhathaleki ukuthi ugxile ekunethezekeni ngezihlalo zikanokusho ze-ergonomic noma ukugqamisa ikhwalithi ngezinto ezisezingeni eliphezulu nemiklamo, izihlalo zethu zokuzilibazisa zikanokusho zizolingana nemiklamo yakho.
Uchungechunge lwezihlalo zezihlalo zokungcebeleka zensimbi.
Isisekelo senziwe ngensimbi. Kukhona izingxenye ezimbili zensimbi phakathi kwezingalo ezimbili. Ngemuva kwe-backrest nangaphambili esihlalweni sesihlalo kunensimbi yokuyisekela. Ngakho-ke isisekelo sinzima futhi siqinile. IHolster yisikhumba sangempela sokungenisa ngombala ompunga womnqumo. Ngaphansi kwe-foam ephezulu kakhulu kukhona insimbi ephelele. I-armrest enesikhumba isilethela umuzwa omuhle.
Ukukhanya kwelanga ntambama, uhlale esihlalweni sokungcebeleka ubambe incwadi, ubeke inkomishi yekhofi laseMelika etafuleni eliseceleni elincane, bese ujabulela iholide elihle. Izihlalo ezincane zokuzilibazisa ekamelweni lokulala sithuthukisa imizwa yokuhlala, kungcono kakhulu kuhlanganiswe nehadiwe emnyama enombala wesibhamu, ibekwe egumbini lokulala. Kuhle kakhulu ekamelweni lokulala.
Izihlalo Zokuphumula zezikhala ezincane zisebenzisa isilinganiso segolide esingunxantathu, futhi ifreyimu engezansi iyinsimbi esindayo, izinze kakhulu. Amakhushini nezinsika zangemuva zihlanganiswe ngokuphelele. Ilineni likakotini elimpunga lakudala libukeka linombala owengeziwe. Beka umcamelo esihlalweni bese uncika, kukhululeke kakhudlwana. Okubaluleke kakhulu, konga isikhala.
I-MEDO Minimalism Dining Chairs Umkhiqizi
Ufuna isihlalo sokudlela? Nanku umthombo onokwethenjelwa okukunikeza ukwakheka kwemfashini ezintweni ezahlukahlukene kubandakanya ukhuni nesikhumba, insimbi nesikhumba.
Izihlalo zokudlela zokunethezeka zesimanje ezikhiqizwe yi-MEDO zingahlanganiswa nemiklamo yetafula lokudlela ehlukile. Kulula kuwe ukunikela ngamasethi okuphelele okudlela kumakhasimende wakho.
Njengokhuni lwakho lomlotha oluqinile olukhethiwe nesikhumba sekhwalithi ephezulu se-microfiber, siyakwazi ukunikela ngezihlalo zokudlela ngentengo nekhwalithi elinganiselayo. Yenziwe ngomshini osezingeni eliphakeme nobuchwepheshe besikhathi samanje, ungathembela kithi ekusebenzeni nekhwalithi.
Izihlalo Eziphezulu Zokudlela Emuva
Kuyisihlalo sokudlela esilula nesinomusa ngaphandle kokuguqulwa okuningi, okungama-degree angama-90 nomcamelo wezihlalo, omuhle. Umbala wetiye ungomunye wemibala ethandwa kakhulu. Kuyinto ehambisanayo impela namatafula ahlukene okudlela.
Izihlalo zokudlela ezinezingalo, ezivame ukubonakala kumaphrojekthi wobunjiniyela, igumbi lokufundela, indawo yokudlela, igumbi lokudlela, nezinye izigcawu eziningi ezahlukahlukene. Inemibala ehlukene etholakalayo ekukhetheni kwakho. Izindawo zokubambela izingalo aziphakeme kakhulu, kepha zonke izindlela zingakubamba kahle izandla, ukukunikeza induduzo eyengeziwe. Kuyinto ehlukahlukene ekufaniseni amatafula ahlukene okudlela.
Izihlalo Zokudla Kwesikhumba Samanje Nezindwangu
Kungumklamo omusha, Izinto ezigxile ekuklanyeni ziye zaba enye yezindlu zesimanje. Emoyeni omncane, izihlalo zokudlela zesikhumba zanamuhla zimele.
USihlalo Wokudlela we-Armrest.
Yonke imikhakha ingeyokunethezeka, ngobuciko obuhle. I-grayscale elinganiselayo futhi ilungele ukufanisa amatafula okudlela emabula amhlophe. I-waistline iyagoba phakathi, ixhasa nje umgogodla wakho. Ilula futhi iyasebenziseka.
USihlalo Wokungcebeleka Kwefenisha Yesimanje
Usihlalo Wezokungcebeleka 760 * 1000 * 990mm Isihlalo ukuphakama: 410mm
Izinto: Indwangu / Microfiber lesikhumba / Ingxenye yesikhumba sangempela
Umlenze Wokudla: Carbon Steel Umlenze
Usihlalo Wezokungcebeleka Ukuphakama kwesihlalo okungu-770 * 840 * 770mm: 430mm
Usihlalo Wezokungcebeleka 770 * 870 * 900mm
Ukuphakama kwesihlalo: 390mm
Izinto: Indwangu / Microfiber lesikhumba / Isikhumba sangempela
Usihlalo Wezokungcebeleka 830 * 840 * 870mm
Ukuphakama kwesihlalo: 400mm
Umlenze Wokudla: Umlenze Wensimbi Engagqwali
Usihlalo Wokudlela Ifenisha Yesimanje
Sihlalo sokudla 670 * 630 * 750mm
Izinto: Veneer ngibhema, 304 insimbi engagqwali titanium kuhlinzwa
Sihlalo sokudla 620 * 690 * 820mm
Izinto: Microfiber lesikhumba & Indwangu
Sihlalo sokudla 510 * 550 * 800mm
Izinto: Isikhumba seMicrofiber
Izinto: Isikhumba sesihlalo seWood + Premium
Umlenze Wokudla: Umlenze Oqinile Wokhuni